Deg Deg:Dawlada Hindiya Oo Codsi U dirtay Pakistaan? – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Dawlada Hindiya Oo Codsi U dirtay Pakistaan?
Waxaa sii xoogeesanaya xiisada u dhaxeysa labada wadan ee dariska ah ee Pakistan iyo Hindiya oo isku heesta maamulka gobolka Kashmiir oo kuyaala xadka ay wadaagaan labada wadan.
Ciidamada Milatariga dalka Pakisan ayaa shalay gacanta ku dhigay duuliye u dhashay dalka Hindiya, kadib markii lasoo riday labo diyaaradood oo nuuca dagaalka ah uu mid kamid ah duuliyahan waday.
Dowlada Hindiya ayaa war ay soo saartay uga dalbatay dowlada Pakistan in lasoo daayo duuliyaha gacanta ugu jira ,waxa ayna Hindiya wax laga xumaado ku tilmaantay sawirada laga soo qaaday duuliyaha oo dhaawac ah .
Duuliyahan Hindiya u dhashay ayaa markii diyaaradii uu waday kusoo dhacday dhulka Pakisttan waxaa gacanta ku dhigay si xuna u garaacay shacabka Pakistan, waxaana markii dambe duuliyaha badbaadiyay Milatariga Pakistan.
Xiisada u dhaxeysa dowladaha Pakistan iyo Hindiya ayaa cirka sii gashay markii Milatariga Pakistan dhulka soo dhigeen labo kamid ah diyaaradaha dagaalka Hindiya oo maalmo kahor duqeymo ka fuliyay dhulka Pakistan maamusho
Previous Post: Deg Deg Daawo Video:Axmed Karaash Oo Ka Hadlay Dilkii Taleex iyo arrimo kale,
Next Post: Deg Deg:Kenya Oo Dacwad Ka Gudbisay Soomaaliya.